Resveratrol - J & S Botanics
soosaaray jilif Yohimbe
St John johannesört ee laga soosaaray
Organic Propolis budada
Lyophilized budada jelly boqornimada
Tirada Min.Order: 100 Boqorradii
Supply Kartida: 10000 Boqorradii per Month
[Name Latin] Polygonum Cuspidatum Sieb. et Zucc
[Plant Source] Shiinaha
[Sooc] Resveratrol 50%, 95%, 98% by HPLC
[Imaansho] Brown ama budo cad wanaagsan
[Plant Part Isticmaalo] Rhizome & Root
[Walxaha size] 80 mesh
[Loss on qalajiyo] ≤5.0%
[Culus Birta] ≤10PPM
[Kaydinta] Store ee aagga qabow & engegan, ka fog iftiinka ayaa si toos ah iyo kulaylka hayn.
[Xidhmada] buuxiyey oo ku yaal warqad-fuusto iyo laba caag-bacaha gudaha.
1.100% ilaha dabiiciga ah. Our resveratrol waa 100% laga soo geedo yaryar oo dabiici ah, mid aad u ammaan ah iyo bioactive dheeraad ah, taas oo hodan ah iyadoo labada CIS-resveratrol iyo trans-resveratrol.
2.Our resveratrol dhow leeyihiin uma dhadhamin xun barbardhigaan resveratrols kale iyo waxa ay noqon karaan si fudud loo qaado by afka.
3.We dalab resveratrol qiimo aad u tartan rasmi ah la tayada fiican.
4.We leeyihiin wax soo saarka oo aad u ballaaran oo ay kari karin saaraha sida macaamiisha shuruud gaar ah.
Resveratrol waa qayb firfircoon ka Huzhang (cuspidatum Polygonum) ee Shiinaha bixiyay.
Waa phenol ah antioxidant iyo vasodilator a awood in uu hakiyo Avv serum triglyceride, peroxidation la egyahay, iyo xulkii dhiig xinjirowga.
Waxaa aad loogu isticmaalaa si loogu daweeyo cudurka marinka dhiigga sida atherosclerosis iyo hyperlipidemia. Intaa waxaa dheer, waxa ay leedahay anti-virus iyo dhaqdhaqaaqa bararka anti, daweyn karaan cudurada microbial ba'an iyo hepatitis viral.
Previous: Reishi likaha Warbixiinta
Next: Rhodiola Rosea Warbixiinta
Giant Knotweed Extrac
soosaaray cuspidatum Polygonum
White Willow jilif Warbixiinta
Green Coffee Bean Warbixiinta
Powder Warbixiinta Garlic
Warbixiinta Seed bocorka
Faa'iidooyinka 5-HTP Inta badan sidoo kale 5-HTP yaqaan oxitriptan (INN) waxaa laga soo miraha geed fuulitaanka a Woody hooyo ...
Bee Products: Supe The Original ...
The shinni malab kuwa is-hoosaysiiya ayaa ka mid ah noolaha ugu muhiimsan ee dabiiciga ah ee. Bees waa mid muhiim u ah wax soo saarka ee cuntada in aan ...